Makà Wii avy amin'i Noobie! | Martech Zone
Ilay namako akaiky, Patric… aka Andriamatoa Noobie, dia manome Nintendo Wii! Patric dia mpinamana be amin'ny bilaogiko nandritra ny taona lasa ary nanana kaopy kafe maromaro niaraka tamin'ny namantsika izahay Ny amboaram-boanjo.
Na dia mientanentana aza aho rehefa mahazo ireo gadget farany na teknolojia vaovao indrindra, dia zava-dehibe ho ahy ny mahatadidy fa ny ampahany betsaka amin'ireo olona mitsidika ny tranokalako dia tsy misy fantatro izay lazaiko. Eo no miditra Andriamatoa Noobie! Na manana olana amin'ny fahazoana ny TiVo ianao, mpizaha tranonkala, na telefaona farany indrindra, dia inoana fa nanoratra na namorona podcast momba an'io Andriamatoa Noobie. Lehilahy mahafinaritra manao asa lehibe izy!
Ampio hampiroborobo ny fanomezana an'i Patric
Rehefa nilaza tamiko i Patric fa manome Wii, dia nilaza taminy aho fa te-hanao bilaogy momba an'io. Ho fampahafantarana feno anefa, misy ihany koa fanentanana ho ahy! Andriamatoa Noobie koa dia manome iPod Nano sy iPod Shuffle!
Raha avy amin'ny tranokalanao ny ankamaroan'ny fisoratana anarana dia mandresy iPod Nano 8GB ianao.
Raha avy amin'ny tranokalanao ilay nandresy ny Nintendo Wii dia mandresy iPod Shuffle 1GB ianao.
Momba an'i Noobie:
Noobie no tanjonao amin'ny fampianarana teknolojia. Na te-hahazo tombony betsaka amin'ny gadget farany ianao na hianatra fomba vaovao hahatonga ny teknolojia hiasa ho anao, afaka manampy izahay. Noobie dia manolotra fampahalalana azo antoka sy kendrena amin'ny tontolo azo antoka sy azo antoka. Manatreha hetsika iray, vakio an lahatsoratra, zahao ny bilaogy, na manorata fandaharana fampiofanana.
Iza no tokony hiditra?
Mazava ho azy fa izay maniry Wii dia tokony hiditra handresy. Ho fanampin'izay, na izany aza, aza hadino ny mamoaka ny teny amin'ny Noobie amin'ireo namanao sy fianakavianao izay somary ihantsiana. Na dia olona ao amin'ny biraonao aza izany dia afaka mivoaka i Patric ary manao fampiofanana amin'ny tranonkala. Lehilahy mahafinaritra izy miaraka amina mpanaraka marobe ary manana fo lehibe kokoa noho ny fanampiana ireo olona manodidina antsika izay mirona hampitahotra, fa tsy hientanentana, momba ny teknolojia.
Midira izao raha te hahazo ny Nintendo Wii avy any Noobie!
Tags: automattictsindrio nyNy maha-zava-dehibe ny tsindry irayFivarotana finday sy tablettekarama tiaretweetfizarana karamafomba fijery voaloaloharanofandefasana hafatra azo antokashopifystevekremerNy mpitarika ny tsenavirurlserivisy ho an'ny tranonkala